IT Ọrụ Desk Software | Motadata
Akụrụngwa Desktọ ọrụ
Azụmaahịa na-enye ike
Otu ITIL kwadoro, PinkVERIFY asambodo, Desk Ọrụ IT Ewuru na DFIT (Mkpụrụ mmụta miri emi maka ịrụ ọrụ IT) nke na-enyere ndị azụmaahịa aka ịnakwere ngwa ngwa na mgbanwe ndị mmadụ, usoro, na teknụzụ.
Desk ọrụ IT nyeere AI aka ịkwọ ụgbọala
40% Mmadụ ole na ole Hrs.
naanị site na ịmegharị usoro dị ka onye ọrụ n'ụgbọ mmiri na ịpụ apụ.
80% Mbelata na MTTR
site na-akpaghị aka usoro nke na-ekenye tiketi njikwa ihe omume na njirisi abawanye SLA.
$ 350K Ego kwa afọ
site na imezi njikwa ngwa ahịa nke IT na akụrụngwa na-abụghị IT.
Hazie ihe omume ngwa ngwa wee kwalite ahụmịhe onye ọrụ ikpeazụ Desktọpụ ọrụ IT ọhụrụ
Software Desk Ọrụ enyere AI aka nke na-enyere ndị nka na ụzụ aka inye ọrụ enweghị nkebi, Belata MTTR, Belata Mgbapụta, ma na-enye nkwado pụrụiche nye ndị ọrụ njedebe nwere omume mgbanwe na akpaaka nwere ọgụgụ isi.
Arịrịọ maka njikwa ndụ ndụ
Kwado njikwa okirikiri ndụ ngwụcha ruo ọgwụgwụ nke arịrịọ ọrụ ọ bụla yana modul ITIL jikọtara ọnụ dị ka ihe omume, nsogbu, ihe ọmụma, mgbanwe na njikwa ntọhapụ.
Mepụta ọnọdụ site na eserese mmekọrịta maka RCA ka mma
Wepụta njikwa ihe ọmụma site na nchọ dị elu iji kwalite enyemaka onwe onye na chegharịa tiketi
Jikwaa, hazie, ma mejuputa mgbanwe nke ọma ma megharịa usoro mgbanwe ahụ site na iji usoro ọrụ agbakwunyere
Nhazi nke usoro IT
Meziwanye arụpụtaghị ihe
Wepụ ihe aga-eme ugboro ugboro n'aka site na iji automation nwere ọgụgụ isi na-ewe oge na mkparịta ụka na-ewe oge gị na ndị ọrụ njedebe gbasara okwu ama ama site na iji onye ọrụ mebere.
Enweghị onye nrụpụta koodu na-arụ ọrụ iji mepụta usoro ọrụ ọtụtụ ọkwa
Jikwaa ọrụ ndị ọrụ nka ma kpalite ọrụ ọgụgụ isi
Mepụta ọnọdụ maka ụdị ihe omume akọwapụtara
Jiri usoro bot anyị na-anabata ikpe-eji ọ bụla nke na-enye ohere ijikọ na ngwa ndị ọzọ nke atọ ọ bụla
Ọrụ ntuziaka dị obere
Kpebie tiketi ozugbo dabere na mkpa, nweta ọkwa maka mmebi SLA, wee tụọ arụmọrụ SLA site na iji njikwa SLA.
Mepụta ọtụtụ amụma SLA yana njirisi ịrị elu
Tiketi na-ebuli onwe ya ma gwa ndị isi ihe metụtara mmebi SLA site na iji iwu akpaaka akọwapụtara nke ọma.
Tulee arụmọrụ SLA site na iji mkpesa nnabata iji nweta visibiliti na nnyefe ọrụ
Mmekọrịta ya na onye nnọchi anya Virtual
Onye NLP kwadoro, onye nnọchi anya mebere iji nyere ndị otu aka iwelata tiketi nwere azịza amaara site na nzaghachi akpaaka, nke ahaziri iche yana site na ịnye ohere ịnweta ntọala ihe ọmụma, na-azọpụta oge buru ibu maka ndị ọrụ nka ka ha lekwasị anya na nsogbu.
Dọrọ ma dobe onye na-emepụta mkparịta ụka ka ịmepụta mkparịta ụka na-aga
Zụọ ọtụtụ ụdị na okwu ọchụchọ nkịtị
Mepụta plugins nkata omenala iji kwalite arụmọrụ
Belata ego iji jee ozi
Nye nkwado ahaziri ahazi 24 x 7
Nkuchi ọtụtụ ọwa
Bulite ahụmịhe ndị ahịa site na tebụl ọrụ ọtụtụ ọwa. Kwado ndị ọrụ ka ịhọrọ ụdị nnyefe ọrụ sitere na email, site na ọnụ ụzọ ọrụ onwe ruo na chatbots.
Mee ka njikọ aka ndị ọrụ dịkwuo elu site n'itinye ọwa mmekọrịta dị ka WhatsApp, MS Teams, wdg. n'ime ọrụ onwe onye.
Nye ndị ọrụ ohere ịnweta ọnụ ụzọ ọrụ n'ụzọ dị mfe site na ngwa mkpanaka anyị
Mee ka ntọala ihe ọmụma nweta site na ọnụ ụzọ ọrụ site na nchọ dị elu
Mụbaa nnabata oche ọrụ
Nnweta ka mma
Ngwọta Njikwa Ọrụ Digital IT Leveraging AI.
Nkeji tiketi dabere na AI
Njikwa ibu ọrụ ọkachamara AI-chụpụrụ
Iwu ụdịdị dị egwu maka katalọgụ ọrụ
Oche Ọrụ modul
Ụlọ ọrụ Motadata's ServiceOps Service na-enyere gị aka ịmegharị usoro ntuziaka iji mee ka arụmọrụ dịkwuo mma ma kwalite ogo nke nnyefe ọrụ gị.
Ihe ngwọta na-arụ ọrụ nke AI/ML kwadoro iji jide na dozie nsogbu na nnyefe ọrụ ha.
Ngwá ọrụ ITIL kwadoro nke na-enye ohere ịmekọrịta tiketi ndị yiri ya na ime nyocha ihe kpatara mgbọrọgwụ.
Jikwaa arịrịọ ọrụ site na usoro ndụ ha zuru oke site na iji usoro ITIL na akpaaka AI na-achụ.
Ihe ngwọta jikọtara ITIL nke na-enyere otu nzukọ aka ibelata ihe ize ndụ na mmetụta nke mgbanwe.
Ihe ngwọta iji wepụta mgbanwe na mwepụta ọhụrụ site na nsochi amamihe nke ogbo.
SLA iji kọwapụta ọkwa nke nnyefe ọrụ yana nnabata nke njikwa tiketi iji jikwaa ogo ọrụ.
Ngwọta njikwa ngwa ahịa IT na nke na-abụghị IT nke na-akwado usoro ITIL iji jikwaa okirikiri ndụ akụ.
Ihe ngwọta iji mepụta ebe nchekwa dị n'etiti nke akụkọ ihe ọmụma na-akpali ndị ọrụ ha maka ọrụ onwe ha na inyere ndị ọkachamara aka.
Onye nnọchi anya mebere
Sistemu nkata NLP kwadoro nke na-atụgharị ajụjụ ma ọ bụ ajụjụ onye ọrụ ka ọ bụrụ ihe nwere ike ime dị ka tiketi.
Ihe ngwọta iji mee ka nnyefe ọrụ dị mfe site na iji katalọgụ ụdị azụmahịa e-azụmahịa yana nhazi akpaaka.
Akụrụngwa ọrụ & njikwa nhazi
CMDB nke na-enye visibiliti nke ngwaike, ngwanrọ na akụrụngwa na-abụghị IT ka idobe ya.
Usoro njikwa ọrụ kensinammuo nke na-enye gị ohere imebi ihe omume dị mgbagwoju anya n'ime obere nkeji.
Ngwanrọ njikwa ọrụ Motadata IT dị mfe iji, dị mfe ịtọlite ​​​​ma nwee ihe niile ịchọrọ iji nye nnyefe ọrụ IT enweghị nkebi.
Ikpo okwu AI na-enyere ndị otu IT ike ịme mgbanwe ngwa ngwa n'ofe ndị mmadụ, usoro na teknụzụ iji kwalite nnyefe ọrụ.
Kedu ihe dị iche n'etiti oche enyemaka na oche ọrụ?
Isi ihe na-elekwasị anya na oche enyemaka IT bụ inyere ndị ọrụ njedebe aka na mkpebi ngwa ngwa maka arịrịọ ọrụ ha ngwa ngwa yana ihe omume teknụzụ. Desktọpụ enyemaka bụ ọrụ akọ na arụ ọrụ, mana ekwesịrị ka ọ rụọ ọrụ nke ọma na ngwa ngwa.
N'aka nke ọzọ, oche ọrụ IT nwere ebumnuche sara mbara karị, nke dabara adaba na ebumnuche nhazi. Ọ na-arụ ọrụ dị ka isi ebe njikọ dị n'etiti ndị ọrụ na ndị na-enye ọrụ.
Desktọpụ ọrụ, n'adịghị ka oche enyemaka, na-atụle mkpa nhazi ka ukwuu na ihe gbara ya gburugburu kama ilekwasị anya naanị na idozi nsogbu ndị ọrụ njedebe. N'agbanyeghị na oche ọrụ na-agụnyekarị oche enyemaka, ebumnuche ya bụ isi bụ ịgbasi mbọ ike n'ịkwalite usoro IT na azụmahịa nke otu ụlọ ọrụ.
Kedu ihe kpatara oche ọrụ IT ji dị mkpa?
Desks ọrụ na-eme ka nkwurịta okwu na imekọ ihe ọnụ n'etiti IT na ngalaba ndị ọzọ, na-enyere aka na mkpebi na ọbụna igbochi okwu site n'ịkwado mmepụta, ọrụ, nsochi, na mkpebi nke tiketi. Ha na-arụ ọrụ dị ka ebe nchekwa etiti maka akụrụngwa ngwaike na ngwanrọ nzukọ niile.
Desks ọrụ na-enyere aka n'ịhazi na ịhazi usoro IT site na iji ụkpụrụ ITIL kwalite atụmatụ IT n'ozuzu ya. Ha na-enyere aka ịchịkọta na idobe data sitere na ihe omume, arịrịọ, na nsonaazụ arụmọrụ, na-enye ohere maka nyocha ziri ezi karịa iji mee mkpebi IT sitere na data.
Kedu ihe kacha mkpa KPI nke ọrụ IT iji tụọ?
KPI oche ọrụ na-anọchite anya ọganiihu ma ọ bụ ọdịda nke atụmatụ nkwado ndị ahịa nke otu nzukọ, yabụ na ha bụ nsonaazụ kacha pụta ìhè. Na-enweghị ha, ndị otu IT enweghị ike ịlele ihe na-arụ ọrụ na ihe na-adịghị. Ịhọrọ oche ọrụ kwesịrị ekwesị KPI bụ ka ndị otu nkwado na-ewepụ mbọ ndị na-adịghị mkpa, ka ha nwee ike ilekwasị anya naanị na mmemme ndị dị mkpa.
Enwere ọtụtụ KPI nke enwere ike tụọ, agbanyeghị nke kachasị na nke dị mkpa iji tụọ arụmọrụ oche ọrụ IT bụ Trends Volume Ticket, Ọnụego Mkpebi Oku mbụ, nnabata SLA, afọ ojuju onye ọrụ njedebe, ọnụ ahịa akụrụngwa akụrụngwa, yana ọnụ ahịa kwa otu. tiketi.
Kedu ọrụ onye nnọchi anya/onye na-ahụ maka tebụl ọrụ?
Onye ọkachamara Desk ọrụ na-eje ozi dị ka ebe njedebe onye ọrụ iji nyere ha aka na nsogbu IT ha. Ọrụ bụ isi nke onye ọrụ oche ọrụ gụnyere ịchọpụta, nyocha, nchọpụta nsogbu na idozi ihe omume IT. Ha na-ewere okwu ndị a wee bulie ha gaa na ndị ọrụ nkwado IT nke abụọ ma ọ bụrụ na enweghị ike idozi okwu ahụ ma ọ bụ n'ihe banyere imebi SLA.
Ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ga-ahazi nke ọma na nke ọma na nkà na ụzụ dị elu na teknụzụ ma ọ bụ ngwaọrụ dị iche iche. Ha ga-aba uru na njikwa mmekọrịta iji mekọrịta ma ghọta nchegbu ndị ọrụ njedebe, na-enye ha ohere ijikwa mkpebi nke okwu ahụ nke ọma.